Andininy Mahendra Alladi momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mahendra Alladi
Ny fijanonana mialoha ny fanovana haingana sy ny famerenana amin'ny sehatra lehibe, toa ny Salesforce, dia mety ho fanamby. Saingy ny Salesforce sy ny AccelQ dia miara-miasa hiatrika izany fanamby izany. Ny fampiasana ny sehatry ny fitantanana kalitaon'ny AccelQ, izay mifamatotra mafy amin'ny Salesforce, dia manatsara sy manatsara ny kalitaon'ny famoahana Salesforce an'ny fikambanana. AccelQ dia sehatra iarahan'ny orinasa ampiasaina hampiasana automatique, hitantana, hanatanteraka ary hanarahana ny fitsapana Salesforce. AccelQ ihany no fitsapana mitohy